I-china abakhiqizi bokugaya abaqondile be-slag nabaphakeli | BBMG
Slag isigayo mpo
I-slag mpo yokugaya imishini yokugaya yomoya ocindezelayo engemihle, ezomisa i-slag bese igaya i-slag.
Umhlabathi we-slag nge-roller yokugaya ku-disc yokugaya yakhiwe izingxenye ezimbili: ingxenye encane ye-slag entsha enokuqukethwe okuphezulu kwamanzi futhi iningi le-slag engakaqediwe enamanzi aphansi. Le ngxenye ye-slag engaqediwe iyinto ewumbala ebuyiswe ngemuva kokuhlukaniswa isihlukanisi ngenxa yezinhlayiya ezinkulu. Umoya onamandla wokucindezela onamandla wabangela izingxenye ezimbili ze-slag ukuthi ziwele kudiski lokugaya.
Ngaphansi kwesenzo samandla we-centrifugal, i-slag iqondiswa ku-roller yokugaya esizayo, futhi i-slag ihlangene ngokunciphisa ukushaywa kwe-roller yokugaya okusizayo. Iroli yokugaya esizayo igcina ibanga elithile ukusuka kudiski yokugaya, futhi imiswe engalweni ye-rocker enesisindo esilula kakhulu.
Iroli yokugaya eyinhloko igxilwe engalweni ye-rocker enkulu, futhi ungqimba lwezinto ezilungisiwe lucindezelwa ukugaya. Amandla akhiqizwa isisindo se-roller yokugaya uqobo nengcindezi yohlelo lokubacindezela.
Irola lokugaya lizungeza ngokuzihlikihla embhedeni olwalazayo. Inzwa kanye nebhafa yomkhawulo wedivayisi efakwe engalweni ye-rocker ingavimbela ukuxhumana kwensimbi okuqondile phakathi kweroli yokugaya nediski yokugaya.
Izinhlayiya ze-slag zomhlaba ziphonswa ngaphandle ngamandla we-centrifugal futhi zigeleze kwindandatho yokugcina. Lapha kubanjwa ukuhamba komoya kukhuphuka eringini lomoya, futhi uthuli negesi kugeleza egumbini lokugaya, ukuze lizungezwe isilinda sokugaya esiqondile esifakwe ulwelwesi olungagqokiwe futhi singena kusihlukanisi sempuphu. Isihlukanisi se-powder sifakiwe noma sishiselwe emgqonyeni wokugaya oqondile.
Ngaphandle kosizo lokudlulisela okusizayo, isigayo esime mpo singalayishwa ngqo bese siqala ngemoto enkulu ngaphansi kwesimo sokulayisha (ngemuva kokucisha isikhashana). Ukuze wehlise imoto enkulu, iroli yokugaya iphakanyiswa ngamandla ukuze kuncishiswe ingcindezi yohlelo lokubacindezela. Amafutha angeniswa emgodini ongenalutho we-hydraulic cylinder.
UKUGAYA IDIYELA YEDISKI
Langaphambilini Ukugaya roller
Olandelayo: Amalahle isigayo mpo
Izigayo eziqondile zeSlag
Amalahle isigayo mpo
JGM2-113 amalahle isigayo kuyinto naphakathi ngesivinini roller uhlobo amalahle isigayo. Izingxenye zalo ezicolwayo zakha indandatho ejikelezayo kanye nama-roller amathathu okugaya ahamba endandeni yokugaya, futhi ama-roller ahleliwe futhi ngalinye lingazungeza ku-eksisi yalo. Ukuze kufuthwe amalahle aluhlaza awela eringini lokugaya lisuka embotsheni yamalahle eyehla phakathi komgudu futhi indandatho yokugaya ejikelezayo ihambisa amalahle aluhlaza emgaqweni wendlela yokugaya ngamandla we-centrifugal. Amalahle aluhlaza afakwa iroli. roll ...
Umshini wokugaya wumshini omusha wokugaya owenziwe maphakathi no-1980s Ubuchwepheshe obusha bokuqothula nokugaya ikakhulukazi obenziwe ngayo bunomphumela omuhle ekongeni amandla, futhi wathola ukunakwa okukhulu okuvela embonini yamakhemikhali omhlaba jikelele. Sekuwubuchwepheshe obusha ekuthuthukiseni ubuchwepheshe bokugaya. Umshini usebenzisa isimiso sokusebenza sokusetshenziswa kwamandla okuphansi kwengcindezi yempahla ephezulu futhi usebenzisa imodi yokusebenza ye-particle cru eyodwa ...
Ugayo oluqondile oluqondile luhlobo olulodwa lwensimbi yokugaya efakwe ama-roller amane. Iroli yokugaya, ingalo ye-rocker, isakhiwo sokweseka nohlelo lwe-hydraulic kwakha iyunithi yamandla okugaya, ehlukaniswe ngamaqembu ama-4 futhi ahlelwe azungeze idiski yokugaya. Ngokombono wezobuchwepheshe nezomnotho, umshini wokugaya ongahluziwe imishini yokugaya esezingeni eliphakeme kakhulu, uma uqhathanisa nemishini yendabuko yokugaya, unezinzuzo ezilandelayo: ―Ingasetshenziselwa ukugaya izinto ezahlukahlukene mSmall ...
Isigayo se-JLMS roller sisetshenziselwa ukugaya kusengaphambili isamente klinikhi. Umgomo wayo osebenzayo ngukuthi: i-clinker ingena esigayweni nge-chute emaphakathi: impahla iwela maphakathi nediski yokugaya ngamandla adonsela phansi. Idiski yokugaya ixhumeke ngokuqinile kusinciphisi futhi ikhetha ukujikeleza ngejubane eliqhubekayo. Ukujikeleza kwejubane eligcwele lediski yokugaya kusabalalisa izinto zomhlaba ngokulinganayo nangokuvundlile kupuleti eline-disc yokugaya, lapho i-roller-type grinding roller iluma khona ...
Umshini wosimende ungowokusebenza kokugaya izinto zokusetshenziswa kasimende. Isimiso esisebenzayo ngale ndlela elandelayo: izinto zokusetshenziswa zifakwa emgodini wokuphakelayo ngamathathu alandelana ama-valve okhiya umoya, futhi umgudu wokuphakelayo ufinyelela ngaphakathi kwendawo yokugaya ohlangothini lwesihlukanisi. Izinto ziwela enkabeni yediski yokugaya ngomthelela wamandla adonsela phansi nomoya. Idiski yokugaya ixhumeke ngokuqinile kusinciphisi futhi ijikeleza ngejubane eliqhubekayo. Ijubane elihlala njalo le-grin ...
Izinto ezijwayelekile ze-GB, EN, DIN, ASTM, GOST, JIS, ISO Material Processing Processing, Casting, Welding Heat Treatment Annealing, Normalizing, Q & T, Induction Hardening Machining Tolerance Max. 0.01mm Imishini Yokukhwabanisa Ubukhulu. I-Ra 0.4 Module yeGear 8-60 Ukunemba Kwamazinyo Max. I-ISO Grade 5 Weight / Unit 100kgs - 60 000kgs Application Mining, Cement, Construction, Chemical, Oil Drilling, Steel Mill, Sugar Mill kanye ne-Power Plant Certification ISO 9001